को बन्ला प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री ? – Sajha Bisaunee
को बन्ला प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री ?
। २७ आश्विन २०७४, शुक्रबार १६:२६ मा प्रकाशित
धेरैले अनुमान गरेका थिए, हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच बनाएका (ठूला) नेताहरू नै मुख्यमन्त्रीका लागि अगाडि सर्नेछन् । तर मुख्य पार्टीका ठूला नेताहरू नै मुख्यमन्त्रीको दौडमा सहभागी हुन चाहेनन् । कांगेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका नेताहरूले नै केन्द्रलाई टार्गेट बनाए । प्रदेश नम्बर ६ मा ठूला भनिएका नेताहरू नै प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार सिफारिस भएपछि अब भावी मुख्यमन्त्री को बन्ला ? भन्ने चर्चा र चासो बढेको छ ।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा निकै चर्चा गरिएका नेता पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्र रोजेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभाका लागि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् । दुईपटक गृहमन्त्री र पार्टीको सहमहामन्त्रीसमेत भइसकेका खड्का नै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने आँकलन गरिएको थियो । तर उम्मेदवार सिफारिसको बेलामा उनी त्यो दौडबाट अलग भए । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अर्का नेता हृदयराम थानीले पनि प्रदेशमा खासै रुची देखाएनन् । पूर्व गरिबी निवारण मन्त्रीसमेत रहेका उनलाई पनि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको थियो । तर सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उनी उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् ।
एमालेमा भने चर्चामा रहेका नेताहरूको नाम नै उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् । मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने चर्चामा रहेका एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्यहरू यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् । पूर्व पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका कँडेल प्रदेशसभाका लागि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर ३ र ज्वाला सल्यान २ बाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका छन् । एमाले प्रदेश नम्बर ६ का सहसंयोजकसमेत रहेका कँडेललाई नै एमालेभित्र भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । मुख्यमन्त्रीकै लागि उनले प्रदेशसभा रोजेको एमाले कार्यकर्ता बताउँछन् । तर माओवादीसँगको चुनावी तालमेलका कारण यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीले दाबी गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।
यदि यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा पर्ने सहमति भएमा एमालेका ठूला नेताहरू पनि मुख्यमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिएर केन्द्रको सीट सुरक्षित गर्न सक्छन् । यद्यपि केन्द्रले नै यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने एमाले सुर्खेतले जनाएको छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीमा चर्चामा रहेका नेताहरू जर्नादन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि केन्द्र नै ताकेका छन् । देशको गृहमन्त्री भइसकेका र पार्टीको केन्द्रमा बलियो प्रभाव राख्ने शर्मा रुकुम र बस्नेत जाजरकोटबाट सर्वसम्मत् रूपमा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् । प्रदेश सरकारको भार थेग्न सक्ने र सरकार सञ्चालनमा अनुभवी भनेर विश्वास गरिएका नेताहरूले केन्द्र नै ताकेपछि सबै दलभित्र विकल्पको रूपमा भावी मुख्यमन्त्रीका लागि अब दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको चर्चा हुन थालेको हो ।
चर्चामा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू
प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल तातिन थालेपछि भावी मुख्यमन्त्रीको चर्चा हुन थालेको छ । यसअघि चर्चामा रहेका नेताहरूले प्रदेशमा रुची नदेखाउँदा मुख्यमन्त्रीका लागि नयाँ अनुहार पनि चर्चामा आउन थालेका छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि सम्भावित मुख्यमन्त्रीका लागि आन्तरिक खोजीमा छन् ।
यो प्रदेशमा कांगे्रसबाट हुम्लाका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीका लागि चर्चामा छन् । खड्का र थानीको विकल्पमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका शाही नै भावी मुख्यमन्त्री हुने आंकलन
गरिएको छ । यद्यपि शाहीले यसबारेमा मुख खोलेका छैनन् । शाही पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन् । उनी निकस्थहरू पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा शाहीले स्वीकार गर्ने बताउँछन् । यस्तै कांग्रेसबाट वर्तमान सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टले भावी मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न थालेका छन् । प्रदेशसभाका लागि सुर्खेतको क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवारमा सिफारिस भएका उनको पनि मुख्यमन्त्रीमा चर्चा सुरु भएको छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्रमा पनि नयाँ अनुहारको चर्चा चल्न थालेको छ । देउवा सरकारका ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा चर्चामा ल्याउन थालिएको छ । २०७० को निर्वाचनमा उनी कालिकोटबाट निर्वाचित भएका थिए । यस्तै सल्यानका अर्का नेता टेकबहादुर बस्नेतलाई पनि भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा माओवादीभित्र प्रचार सुरु भएको छ । उनी देउवा सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । यद्यपि यो प्रदेशमा माओवादीले सरकार गठन गर्ने अवसर पायो र जर्नादन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि रुची देखाएनन् भने शाही नै मुख्यमन्त्रीको बलियो उम्मेदवार हुने माओवादी कार्यकर्ता बताउँछन् । एमालेमा यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । उनीहरूको विकल्पमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा हुम्लाका गोरखबहादुर बोगटीलाई हेरिएको छ ।
‘अन्तिम टुङ्गो केन्द्रले लगाउँछ’
केन्द्रमा पहुँच राख्ने र चर्चामा रहेका नेताहरू प्रतिनिधिसभाका लागि सिफारिस भए पनि अन्तिममा केन्द्रले नै टुङ्गो लगाउने छ । उम्मेदवारी दर्ता हुने बेलासम्ममा पनि भावी मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावित व्यक्तिलाई केन्द्रले प्रदेशमा टिकट दिनसक्ने सम्भावना बाँकी नै छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कमलेश डिसी भन्छन्, ‘दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिले खासै फरक पर्दैन, मुख्यमन्त्री जो सुकै भए पनि दलको विचार र कार्यक्रमले बढी स्थान पाउँछ । प्रदेश सरकार पनि दलको घोषणापत्र र दर्शन अनुसार नै सञ्चालन हुने हो, नयाँ अनुहारले पनि नमूना काम गर्नसक्छ ।’ अहिले जुन तहका लागि सिफारिस भए पनि रणनीति बदलेर दलहरूले रातारात अर्को उम्मेदवार पनि पठाउन सक्ने उनको भनाइ छ । अहिले विपक्षी दलको रणनीति बुझ्नका लागि पनि ठूला भनिएका नेताहरूले केन्द्र ताकेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । प्रदेश सरकार नयाँ गठन गर्नुपर्ने र सुरुवातमा चुनौतीहरू धेरै भएकाले पनि अनुभवि नेतृत्व आवश्यक पर्नेमा उनले जोड दिए ।